ပရိုဖိုင် – Myanmar
Start ကိုတိုက်ရိုက်ကာစီနိုကဒီအကျိုးတူအောင်မြင်သောစေရန် Third-party ဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. ချွတ်စတင်ခဲ့သည်။ အချိန်ပေါ်သွား၏အဖြစ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းမလွယ်ကူထားတဲ့ Third-party ရောင်းချသူနှင့် Third-party စနစ်များ, အတူပွဿနာမြားစှာကွုံတှေ့ခဲ့ရ။
ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ရရှိခဲ့သောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ, ယုံကြည်ခြင်း၏ခုန်ထဲမှာ Start ကိုတိုက်ရိုက်ကာစီနို developer များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသင်းအတွက်ရောက်စေဖို့နှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားဖြေရှင်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကွာအဝေးနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
အားလုံးစတင်၌ရှိသကဲ့သို့, Start ကိုတိုက်ရိုက်ကာစီနို software နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုလည်းစမ်းသပ်မှုတွေနှင့်အမှားအယွင်းများ၏အကူးအပြောင်း, သန့်စင်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်တဲ့ကာလခံယူ, ကြှနျုပျတို့ယခုအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သေးငယ်တဲ့နယ်ပယ်ရှိသည်။ ဤသို့ဖြင့် Start ကိုတိုက်ရိုက်ကာစီနိုကိုတရားဝင်အွန်လိုင်းမှဂိမ်းဖြေရှင်းချက်ပေးသူအဖြစ် Start ကိုတိုက်ရိုက်ကာစီနိုဖွင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Start ကိုတိုက်ရိုက်ကာစီနိုအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားထုတ်ကုန်များနှင့်တိုင်းအော်ပရေတာ / မိတ်ဖက် / Customer များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောထုံးစံ built န်ဆောင်မှု “သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ပေးယုံကြည်သော; သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သူဌေးက Be ​​!?
Start ကိုတိုက်ရိုက်ကာစီနိုမဟာဗျူဟာကျကျရွေးချယ်ထားသည့်အာရှစျေးကွက်ကိုဖြတ်ပြီးက၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအပြေးလျက်ရှိသည်နှင့်ထုတ်ကုန်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးလက်ရှိတွင်အာရှဈေးကွက်ထဲမှာဖောက်သည်များ၏အတော်လေးတစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့်အသုံးပြုမှုဖြစ်ခြင်းနေကြသည်။ ယနေ့၏အဖြစ်, ငါတို့သည်လည်း Start ကိုတိုက်ရိုက်ကာစီနိုအကြောင်းကို 120 ဝန်ထမ်းများရှိပြီးနေဆဲအဖြစ်ဝေးကင်ညာအဖြစ်ဒေသအနှံ့ clients များနှင့်အတူကြီးထွားလာခြင်းနှင့်နေသည်ပြောဂုဏ်ယူကြသည်။